Maxaadan Ogayn oo looga hadlay shir Albaabada ay u xiran yihiin oo dhexmaray G/Yariisow iyo Xubno kasocda QM? - Xogtashacabka24.com | Xogtashacabka24.com Maxaadan Ogayn oo looga hadlay shir Albaabada ay u xiran yihiin oo dhexmaray G/Yariisow iyo Xubno kasocda QM? - Xogtashacabka24.com
Maxaadan Ogayn oo looga hadlay shir Albaabada ay u xiran yihiin oo dhexmaray G/Yariisow iyo Xubno kasocda QM?
Guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna Duqa Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan “Yariisow” ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka socday hay’adda UNDP ee Qaramada Midoobay u qaabilsan dhinaca mashaariicda.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Guddoomiye Yariisow iyo Xubnaha ka socda Hay’adda UNDP ay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa Gobolka Banaadir.
Waxayna soo dhoweeyeen magacaabista Guddoomiye Yariisow oo ay ku tilmaameen mid Shacabka Gobolka Banaadir u horseedeysa horumaro la taaban karo.